Suuqyada Muqdisho Oo Laga Dareemayo Sare U Kac Dhanka Khudaarta Ah – Goobjoog News
Waxaa bilowday xilliga guga roobka, waxuuna Saameyn ballaaran uu ku yeeshay suuqyada Khudaarta ee magaalada Muqdisho.
Qiimaha khudaarta Suuqyada Muqdisho ayaa laga dareemayaa sare u kac aad u ballaaran, iyada oo loo sababeynayo jidadka oo u xirmay roobka daraadiisa.
Dadka ka ganacsada Khudaarta oo Goobjoog News la hadlay ayaa sheegay in xilligan ay khudaarta kacday gaar ahaan Yaanyada.
Luulo Maxamed Cali waxay ka ganacstadaa khudaarta waxay ka warramaysaa sare u kaca xilligan laga dareemayo “Yaanyada caagii labaatanlaha waxaa lagadi jiray 80 kun oo Shilin Soomaali ah, hadda waxaa lagadayaa 300 boqon oo Shilinka Soomaaliga ahm Babeyga isna aad ayuu u qaaliyoobay saameyna waxaa ku yeeshay roobka “.
Farqi noocee ah ayaa u dhaxeeya qiimaha khudaarta xilliyada Jilaalka iyo kuwa roobka waxaa arrintaas Goobjoog News uga warrantay Nimco Xuseen Shire oo ka mid ah ganacsatada Khudaart.
“Baradhadii Kiiladii waxaa ay mareysaa 35 kun oo Shilinka Soomaaliga ah, awalna horay waxaa loo gadi jiray 18 kun Shilin Soomaali ah, Basasha waxaa lagadi jiray 10 kun,halka hadda lagado qiimo dhan 20 kun oo Shilinka Soomaaliga ah”.